Tomboy တွေရဲ့ကာရိုက်တာအတွက် အများကြီး လေ့လာခဲ့ရသလို ကိုယ်တိုင် စိတ်ကူးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံတွေ? - Yangon Media Group
Tomboy တွေရဲ့ကာရိုက်တာအတွက် အများကြီး လေ့လာခဲ့ရသလို ကိုယ်တိုင် စိတ်ကူးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံတွေ?
မကြာခင် ရုံတင်ပြသတော့မည့် ‘ရန်သူ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွင် Tomboy ကာရိုက်တာဖြင့် မြင်တွေ့ရမည့် သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုန်ရွှေရည် …….။
မေး- ‘ရန်သူ’ဇာတ်ကားကို ဘာကြောင့် လက်ခံ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
ဖြေ- ရန်သူဇာတ်ကားက ကစ်အတွက် ကာရိုက်တာက ထူးခြား တယ်။ ဆန်းကြယ်ဆိုတဲ့ကာရိုက်တာက ကစ်အတွက် အသစ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်။
မေး- Tomboy ကာရိုက်တာအတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲ။
ဖြေ- Tomboy တွေရဲ့ကာ ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ တွေရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံ၊ သွားပုံ လာပုံ၊ ပြောပုံဆိုပုံ အကုန် လုံးကို လေ့လာတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အိုက်တင်က သူ့တို့တွေနဲ့ မတူတာမျိုး၊ ကွဲထွက်နေတာမျိုး၊ အိုဗာဖြစ်နေတာမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် လေ့လာတဲ့နေရာမှာလည်း အပေါ်ယံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ နဲ့ အပြင်မှာ တကယ်ရှိတဲ့ Tomboy တွေနဲ့ စကားပြော ကြည့်တယ်။ နေ့တိုင်းနီးပါးတွေ့ ပြီးတော့ အမူအရာတွေကို လေ့ လာဖြစ်တယ်။ အဓိက ကစ်စဉ်း စားထားတာက ဘယ်လို Tomboy မျိုးကို ပရိသတ်ကို ချပြမလဲ။ Tomboy တွေက ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်လေ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က မတူကြဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ် စိတ်ကူးလေးနဲ့ ကိုယ်ဖန်တီးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မေး- နေခြည်ဦးနဲ့ကစ်နဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ရိုက်ကူးခဲ့ကြလဲ။
ဖြေ- ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပေးအယူမျှမျှ ဖြစ်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးတာတွေ၊ အကြံပေးတာတွေ တိုင်ပင်ကြတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံလေးဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်။ ဟိုလို ပုံစံလေးဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေလည်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပြောကြဆိုကြမှာပဲ အပေးအယူမျှမျှ နဲ့ကြည့်လို့ ကောင်းမှာလေ။
မေး- ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းက ကိုယ်တိုင် မောင်းခဲ့တာလား။ ကာရိုက်တာပီပြင်ဖို့အတွက် ပံ့ပိုး ပေးတဲ့သူတွေရော ရှိလား။
ဖြေ- ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့အခန်းကတော့ ကိုယ်တိုင်မောင်းခဲ့တာပါ။ ဆန်းကြယ်ကာရိုက်တာ ပီပြင်ဖို့အတွက် ကစ်ကိုပံ့ပိုးပေးကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ဒီလို ပံ့ပိုးပေးသူတွေကြောင့် ဆန်းကြယ်ကာရိုက်တာ ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ ရုပ်လုံးကြွလာတာပါ။ နောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးပေးမယ့်သူတွေသာမရှိရင် ဆန်း ကြယ်ကာရိုက်တာက ဒီလောက်ပီပြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကစ်ကို ပံ့ပိုးပေး ကြတဲ့သူ တွေအားလုံးကို ကစ်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေး- လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကရော ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ- အခုကတော့ ကစ်ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးဖို့ရှိပေ မယ့်လည်း အခုလောလောဆယ်တော့ မပြောချင် သေးဘူး။
မန်းကျောက်စိမ်းဈေးကွက်တွင် ကျောက်စိမ်းအသစ်များ ဝင်ရောက်မှုနည်းနေသောကြောင့် ကုန်ကြမ်းအတ??
''၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီ အကဲဖြတ်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် ဦးရေ ၄ဝ ဖြင့်ဖဲ??
လွိုင်ကော်မြို့တွင် သစ်သား ခေါင်းတလားများ ရှိနေသော ကျတ်ဂူတစ်ခုနှင့် လူပုံရေးဆွဲထားသော နံရ
ဧရာဝတီလင်းပိုင် သေဆုံးမှုများပြားပြီး အကောင်ရေလျော့နည်းလာဟုဆို
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးတွင် ၁ဝ နှစ်စီမံကိန်း အဖြစ် ဒီရေတောဧက လေးသောင်းခွဲ တည်ထောင်သွားမည်
ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်သမားများကို တားဆီးနိုင်ရန် ဘူမိခြံစည်းရိုးစနစ်နည်းပညာသုံးမည??
Hayabusa-2 အာကာသယာဉ်သည် ဂြိုဟ်သိမ်ပေါ်တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲနိုင်စွမ်း ရှိမည်ဟုဆို
‘တရုတ်မလေးကို ချစ်တယ်’အချစ်ဟာသ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီပြသမည်
လွှမ်းပိုင်နှင့် အိချောပိုတို့ အဓိက ပါဝင်ထားသည့် ‘ကြွေ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မကြာမီ ရုံတင်တေ?
”သုသုကို လာကမ်းလှမ်းတဲ့ ဇာတ်ကောင် စရိုက်အပေါ်မှာ အမြဲတမ်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ မှတ်ယူပြီးတော့ ကိ
ပြည်ပသို့ နှစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကျွဲ၊ နွားကောင်ရေ လေးသိန်းကျော် တင်ပို့ခဲ့ရ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ?